Lalam-barotra dimy | NewsMada
Voalohany, ireo mpamongady mpanangona mivantana ny vokatra any amin’ny mpamboly ; faharoa, ireo indray mifampiraharaha amin’ireo mpamongady sady mpitatitra, manana fiara mahazaka 10 t, araka ny salanisa ; fahatelo, ireo mpitatitra mivarotra amin’ny mpandray ny vokatra mpamongady ihany.
Miala amin’ireo mpanangom-bokatra sady mpitatitra, ireo mpanangona mpanotrika akondro, lalam-barotra fahafetra. Ireto farany ireto no azo lazaina fa mametra ny vidiny any amin’ireo mpitatitra. Efa misy tambajotra ifandraisan’ireo mpitatitra sy mpanotrika, araka ny faritra fiavian’ilay vokatra. Satria mbola amin’ny fomba mahazatra hatramin’ny taona maro ny fanotrehana, tsy maintsy misy mbola very hatrany amin’ny 25 % na 30 % ny lanjany tamin’ny mbola manta ny masaka rehetra.
Tafiditra ao anatin’izany fahaverezan-danja izany ny kajy amin’ny vidiny mankany amin’ny mpaninjara, lalam-barotra fahadimy. Ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina, manjifa 25.000 t isan-taona eo ho eo. 1.800 Ar hatramin’ny 2.000 Ar izao ny kilaon’ny akondro, tafakatra 100 % mahery raha oharina tany amin’ny dimy taona lasa. Ny mpanjifa no mizaka ny fitaterana, karaman’ny mpibata entana, miantoka ny fanotrehana sy izay fahaverezan-danja, sy masonkarena hafa. Ohatrinona izany ny vidiny avy any amin’ny mpamboly ?
Fanatsarana ny voly akondro ho an’ny ho avy :
Fampitomboana ny velaran-tany volena sy fanaovana voly indostrialy hampitombo avo roa heny, raha kely indrindra, ny vokatra.
Fampiharana teknika vaovao ( biotechnologie) hahazoana karazam-bokatra maro.
Fisorohana ireo aretina isan-karazany.
Fanatsarana ny famatsiana eto an-toerana, kalitao sy vokatra sy fitodihana amin’ny tsena any ivelany